Dayactirka Lafaha - Bixiyaha Dayactirka Lafaha Shiinaha, Warshadda –Yenssen
Boog afka ah
Qalabka lafaha ee lafaha
Maaddada Lafta Artifishalka Fiican
waa maxay Osteobone
Isku-darka walxaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah, Osteobone wuxuu dhiirrigelin karaa faafitaanka unugyada lafaha bini'aadamka, shaqada borotiinka morphogenetic, iyo koritaanka lafta cusub. Waxay qaadataa hormarinta tiknoolajiyada daabacaadda 3D si loo dhiso qaab-dhismeedka noolaha ee noolaha kaas oo dammaanad ka qaadaya helitaanka, badashada iyo kala-soocidda unugyada lafaha, koritaanka maraakiibta cusub iyo is-weydaarsiga dheef-shiid kiimikaadka. Intaa waxaa sii dheer, Osteobone wuxuu leeyahay heerka ugu habboon ee udhaxeeya nabaad-guurka maadada iyo koritaanka lafaha cusub.
Wax ka baro sheyga adoo maraya video
Maaddada Osteobone waxay la xiriirtaa unugyada nabarrada lafaha maxalliga ah waxayna dhexdhexaad ka dhigtaa qiimaha pH marka lagu beero aagga cilladda lafaha. Maaddadu si tartiib tartiib ah ayey u yarayn doontaa oo sii deyn doontaa ion-ka silikoon, kaalshiyamka, fosfooraska, ect. Qiyaasta hoos u dhigistu waxay si buuxda ula jaanqaadaysaa xaddiga koritaanka lafta cusub. Ugu dambeyntiina, aagga cilladda lafaha waxaa gebi ahaanba lagu beddeli doonaa laf cusub.
Waxaa loogu talagalay daaweynta dayactirka ee unugyada lafaha cilladaysan ee qaybaha aan culeyska saarin ee jirka bini'aadamka sida jahwareerka orthopedic, isku-darka laf-dhabarka, qalliinka maxillofacial.
Sida loo codso OSTEOBONE
Ku buuxi aaladda Osteobone aagga cilladaysan, oo hubi in xoogaa dhiig ahi ku jiro.
Farqiga u dhexeeya dhagaxyada 'Osteobone granules' wuxuu u baahan yahay in lagu buuxiyo walxaha shiidan ee Osteobone.
Ku dabool iyada oo loo yaqaan 'periosteam' ama xuubka 'collagen synthetic' ka dib markii maadada Osteobone ay gebi ahaanba dhex gasho dhiigga godka lafaha.
Cillad lafaha ah ka dib marka laga soo jaro burooyinka aan fiicnayn
Laba xaaladood oo cillad lafaha ah ka dib markii la soo saaray burada femur waxaa daweeyay maaddada 'Osteobone' iyo maareynta koox koox siday u kala horreeyaan. 24 toddobaad ka dib qalitaanka, waxay muujisay in maaddada Osteobone ay gebi ahaanba hoos u dhacday lafta cusubna ay soo martay. In kasta oo maaddada maqaar-galaha ee kooxda xakamaynta aysan hoos u dhicin, taas oo xannibtay hagaajinta lafta cusub.
1 toddobaad kadib daaweynta Osteobone
24 toddobaad kadib daaweynta Osteobone
1 toddobaad kadib daaweynta kooxda maareynta
24 toddobaad kadib daaweynta kooxda maareynta
Cilad lafta ah ee laf-dhabarka sare ee ilkaha ee ku-tallaalida lafaha
Laba xaaladood oo cillad xagga laf-dhabarka ah ee laf-dhabarka sare ee laf-dhabarka ee lafa-beelka laf-dhabarta waxaa daweeyey Osteobone iyo xakameynta walxaha koox ahaanta. 24 toddobaad ka dib qalitaanka, waxay muujisay in maadada Osteobone ay gebi ahaanba hoos u dhacday lafta cusubna ay soo martay. In kasta oo qalabka unuga ee kooxda xakamaynta uusan hoos u dhicin, oo xannibaya hagaajinta lafta cusub.
Cillad lafaha ka dib markaad soo saartid ciddiyaha lafta gudaha
Laba kiis oo cillad lafo ah ka dib markii la soo saaray ciddiyaha lafta gudaha waxaa daweeyey Osteobone iyo maareynta koox koox siday u kala horreeyaan. 24 toddobaad ka dib qalitaanka, waxay muujisay in maadada Osteobone ay gebi ahaanba hoos u dhacday lafta cusubna ay soo martay. In kasta oo qalabka unuga ee kooxda xakamaynta uusan hoos u dhicin, oo xannibaya hagaajinta lafta cusub.
Cillad lafaha ah ka dib marka laga soo jaro cyst mandibular cyst
Ciladda lafaha ka dib markii laga jeexay dhinaca bidix ee cyst mandibular waxaa daweeyey Osteobone. Waxay muujisay in lafta cusub ay sifiican u koray 24 todobaad qalitaanka ka dib.
Waa maxay adeegyada ma siin karnaa qeybiyeyaasha
Keen warqad dhammaystiran oo diiwaangelinta deegaanka ah.
Iibinta hodanka ah iyo khibradda caafimaad ee suuqa gudaha iyo dibedda.
Taageerada xayeysiinta ee internetka
Warbixinta Tijaabada Caafimaadka
Hel wargeyskeena ugu dambeeyay isla markiiba
Ku dar: No.10, Wadada Dingshan, Aagga Horumarinta Binjiang, Jiangyin, Jiangsu, Shiinaha